Ka maqnaanshada Puntland iyo Jubbaland Shirka Dhusamareb-3 waxay aheyd lagama maarmaan | allsanaag
Ka maqnaanshada Puntland iyo Jubbaland Shirka Dhusamareb-3 waxay aheyd lagama maarmaan
Waxaan qabaa in Mabaadi’ida wada xaajoodka siyaasadda ( principles of political negotiations), ilaalinta dastuurka qaranka, kan dowlad gobleedka, iyo nidaamka dowladnimada ay ku khasbeen Madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland inaysan ka qaybgelin shirka dhusamareb-3. Sababaha ka maqnaanshahooda waxaa lagu faahfaahiyay warsaxafadeedyo labada dowlad goboleed soo kala sareen. Gaar ahaan, Jubbaland waxay ka cabaneysay tacadiyo iyo dhibaatooyin Madaxweyne Farmaajo loo tirinayo ee loo geystay Shirkii dhusamareb-2 kaddib.
Mabaadi’ida ka qaybgalka wada xaajoodyada waxaa ka mid ah: ku kalsoonaanta daacadnimada, ixtiraamka heshiisyada, sharciga, iyo dhaqanka wanaagsan ee dowladnimo ee ka qayb galayaasha iyo u hoggaansanaanta xeerka wada xaajoodka ( procedures of the meeting/negotiation process) iyo buuxinta shuruudaha ka soo qayb galayaasha (conditions for participants/participation).
Jubbaland iyo Puntland waxay dadweynaha Soomaaliyeed la wadaageen sababa ka hagashadooda iyo inay diyaar u yihiin ka qaybgalka shirka dhusamareb-3. Madaxweyne Farmajo waxaa waajib ku ahaa inuu jawaabtiisa la wadaago dadweynaha Soomaaliyeed si loo gaaro xal deg deg. Ma jirto sababo macquul ah oo taagereysa in haddii Puntland iyo Jubbaland tegi lahaayeen Shirka dhusamareb-3, kana soo jeedin laheyn sababaha gadoodkooda ay heli lahaayeen garaabid ama jawaab. Sida darted, talo fiican ma ahaneyd haddana ma ahan inay ka qayb galaan Shirkaas.
4. Safaaradaha Mareykanka, Suuqa Reer Yurub, iyo Ingiriiska oo muddo 3 sano iyo bar ah taagersan, raalli ka ah amar ku taagleynta, ku xadgudubka dastuurka, iyo mu’aamaraadka Madaxweyne Farmajo horseedka ka ahaa. Madaxweyne Farmajo wuxuu Beesha Caalamka uga mahadceliyaa kaalinta muuqata ee ay uga jirta dib u dhiska dowladnimada Soomaaliya, isla markaana wuxuu diida in beesha caalamka fududeyso xallinta khilaafaadka curyaamiyay dib u dhiska dowladnimada Soomaaliyeed. Beesha Caalamka waxay la taagersan tahay hagardaamada Madaxweyne Farmajo, taaso dhaxalsiisay ummadda Soomaaliyeed nabadgelyo xumo, burbur dhaqaale, iyo qalalaase siyaasadeed oo isu beddeli kara dagaal sokeeye.
5. Khudbaddii Xiritaanka shirkii duusamareb-2 oo ku diiday go’ammadii shirkii dhusamareb-1 iyo 2, taaso ku noqotay weji gabax iyo bahdil Madaxweynayaasha DG iyo RW Kheyre oo si foolxul xilka looga qaaday.
8. Khudbaddii Madaxweyne Farmajo ka jeediyay Golaha Shacbiga kuna sheegay in dhaqangalka heshiis kasta ee ka soo baxa shirka dhusamareb-3 ay ku xiran tahay oggolanshooda, taaso meesha ka saartay ahmiyadda shirka dhusamareb-3 madaama BF uu leeyahay go’aanka kama dambeysta ah.
10. Madaxweyne Farmajo oo dagaal ahaan u diiday inuu ka jawaabo, ka hadlo, dadweynaha la wadaago mowqifkiisa la xiriira qodobbada ku qornaa warsaxaafadeedyada Puntland iyo Jubbaland oo lahaa mudnaan weyn. Ma jirin sabab Madaxweynaha Galmudug Qorqor ula xiriiro Madaxweynaha Puntland iyo Jubbaland si ay uga soo qaybgalaan shirka, madaama Madaxweyne Farmaajo joogay dhusamareb, kana ahaa shir guddoomiye shirka dhusamareb-3. Madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland ma qaadicin ka soo qaybgalka shirka. Waxay codsadeen in loo caddeeyo isbeddelka xeerka shirka dhusamareb-3, lagana qanciyo arrimo dastuurka farayo oo ah in shirka uu ka soo qaybgalo RW haysta kalsoonida Barlamaanka Federaalka, kana mas’uul ah xukuumadda (executive branch of federal government). Dhinaca kale, Safaaradda Mareykanka waxay ka gaabsatay in Madaxweyne Farmajo ku cadaadiso inuu ka jawaabo qodobbada Puntland/Jubbaland soo bandhigeen halka ay DG-yada ku cadaadineysay inay ka qayb galaan shirka afduuban, taaso ah gardarro garbo loo yeelay.
Ummadda Soomaaliyeed waxay haysataa heshiiskii ka soo baxay dhusamareb-3 oo markhaati u ah in Madaxweyne farmajo rabo doorasho uu asagu maamulo kor iyo hos. Ummadda Soomaliyeed waxay kaloo dhegeysatay khudbaddii Madaxweyne Farmajo ka jeediyay xafladdii xiritaanka Shirka dhusamareb-3 oo daboolka ka qaaday xeeladaha boobka doorashada 2020/2021. Waxaa la sugaya tallaabooyinka Madaxweyne Farmajo qaado si doorashada 2020/2021 waqtigeeda ugu dhacdo. Puntland iyo Jubbaland waxaa la gudboon inay sugaan inta laga dhisayo Xukuumadda cusub.
← SHIRARKII DHUUSA MAREEB Deni oo caawa kulan la qaatay Ururada Bulshada, →